Archive du 20170601
Kaominina Antananarivo Renivohitra Tsy matahotra �inspection�
Nivoaka tamin�ny fahanginana omaly Julien Andriamorasata, lefitra faharoan�ny Ben�ny tan�nan�ny kaominina Antananarivo renivohitra manoloana ny fanaratsiana sy fanenjehana mahazo ny kaominina iadidiany.
Hery Rajaonarimampianina Miezaka mafy manindry an-dRavalomanana
Vao herinandro vitsy izay i Marc Ravalomanana no nanakiana mafy ny fitondrana tarihin�i Hery Rajaonarimampianina amin�ny resaka tsindritsindry, ary nahavita namoaka vava fa samy hanao zavatra isika ary hahita ny fitondrana.
Depiote Randrianarisoa Stanislas Hajanony ny fanondranana omby any ivelany
Hajanony ny fanondranana omby any ivelan�i Madagasikara, hoy ny depiote voafidy teny amin�ny Boriborintany faharoa teto Antananarivo Renivohitra omaly teny Tsimbazaza, fa io no tena fototry ny halatra omby sy ny asan-dahalo mirohatra be ankehitriny manerana ny nosy.
Nazava tamin�ny fandraisam-pitenenana nataon�ny depiote Kathy avy any Mananjary, omaly teny Tsimbazaza nandritra ny
Depiote Nina na Rahantanirina Lalao Tsy izy intsony io fitondrana ankehitriny io
Raha nanontanian�ny mpanao gazety mikasika ny resaka � motion de censure � mandeha be eny anivon�ny Antenimieram-pirenena omaly talata 31 mey ny depiote Nina na Rahantaninirina Lalao avy any Mahajanga I,
Tatitra nataon�ny praiminisitra Tena fanompana vahoaka�
Nisokatra omaly ary hitohy anio ny fihaonan�ny governemanta sy ny solombavambahoaka, ka itateran�ny fahefana mpanatanteraka ny asa vitany. Nisantatra izany ny praiminisitra sady minisitry atitany Mahafaly Solonandrasana Olivier, ka niompana tamina lafin-javatra 3 dia ny resaka fanjakana tsara tantana, toekarena ary ny sosialy no nanaovany tatitra.
Jean Max Rakotomamonjy Mampidi-kizo ny antenimieram-pirenena
Mahagaga sy mahatalanjona ny fihetsiky ny filohan�ny antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy amin�izao fotoana izao.
Firaisankina ho Fanavotana an�i Madagasikara �Zarao amin�ny Malagasy ny tany�
Mitombina, hoy ry zareo avy eo anivon�ny Firaisankina ho fanavotana an�i Madagasikara (Fi.Fa.Ma), ny filazana fa mety tsy ho antsika intsony ity Madagasikara ity atsy ho atsy, raha izao no mitohy.
Ambany atsinanana avy hatrany ?
Manao ahoana ianareo ry Jean a ! Mbola miaina an-kalalahana ihany ve ianareo ao sa dia efa mitaintain-dava tahaka sahobakaka am-bodiriana ?
Fanambaram-pananana 161 amin�ny 1725 ihany no nahavita
Nifarana omaly 31 mey ny fe-potoana farany tokony hanaovan�ireo tompon�andraiki-panjakana fanambaram-pananana, ka nanao antso fanineniny mba hanatanterahan�ireo mpiasam-panjakana tokony hanao io fanambaram-panana io izany ny Bianco.
Ady amin�ny herisetra ara-nofo amin�ny ankizy 900.000 euros no ho laniana ao anatin�ny 3 taona
Nampahafantra tetsy amin�ny Alliance fran�aise Andavamamba omaly ny fomba fiadin�ireo fokontany miisa 9, izay saika manodidina an�iny 67ha iny ny ankamaroany, hiadiana amin�ny herisetra ara-nofo na fanararaotana ara-nofo mamoafady misy takalony atao amin�ny ankizy.
Kaominina Ambohijanaka Nanampy ireo ray aman-drenin�ny mpianatra
Mitohy hatrany ny asa sosialy tanterahin�ny kaominina ambanivohitra Ambohijanaka amin�izao fotoana izao.
Mbola politika ve ?
Mahatsikaiky ihany ho an�ireo olona tsy dia sarotim-po loatra saingy mahasorena kosa ho an�ireo sarangan�olona leo famitaham-bahoaka sy tena mahalala ny atao hoe politika ny mandre fa niompana tamin�ny �vatsin�Ankohonana� no tena nandaniana ny volam-panjakana hatreto.
Aretina hepatite B Mifindra amin�ny alalan�ny ranonivy koa
Anisan�ny aretin-dratsy iray tena atahoran�ny olona ihany koa amin�izao fotoana izao ny Hepatite B,C,D izay tena mamono haingana tokoa ankoatra ny homamiadana sy ny SIDA.
Nomarihina ny talata 30 mey lasa teo ny tsingeri-taona faha 150 nifandraisan'I Madagasikara tamin�ny alalan�ny tan�nan�i Tolagnaro sy Etazonia.